Fahasalamana: betsaka ireo mampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana | NewsMada
Fahasalamana: betsaka ireo mampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana
80%-n’ny afrikanina no mampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana. Anisan’izany isika eto Madagasikara. Miha-mivoatra ny vokatra malagasy vokarin’ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo.
Nomarihina, omaly teny Alasora, ny Andro afrikanina ho an’ny fitsaboana nentim-paharazana. Voalazan’ny tatitra nataon’ny OMS fa mampiasa izany fitsaboana nentim-paharazana izany ny 80%-n’ny mponina aty Afrika.
Eto Madagasikara, ankatoavin’ny fanjakana izany fitsaboana nahazatra fahiny izany, ary misy ny fotodrafitrasa manohana azy ireny sy ny rafitra miandraikitra ny fampivoarana azy hifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny.
Tanjon’ny fankalazana ny hanairana ny sain’ny mponina amin’ny fampiasana, araka ny tokony ho izy, ny fitsaboana nentim-paharazana mba tsy hanaotao foana fa hanaraka tsara ny fatra ampiasaina mba ho tena hahasitrana tokoa.
Mora amin’ny mponina kokoa ny mividy ny fanafody omen’ireo mpitsabo nentim-paharazana ary misy ny mampifameno izany amin’ny fitsaboana moderina.
Eto Madagasikara, manaporofo ny mbola fironan’ny maro amin’ny fitsaboana nentim-paharazana ny filaharambe hita amin’ireny mpitsabo ireny, ny mpanotra, ny mpitsabo amin’ny alalan’ny sakafo, ny zavamaniry, ny menaka manitra, ny loharano, ny manimanga… Misy mahavatra matory eo am-bavahadin’izy ireny mihitsy milahatra mba ho voaray aloha.
Ankoatra izany, betsaka ireo mpividy ireny karazana tapa-kazo sy mampiasa tambavy hitsaboana. Fanafody voalohany ampiasain’ny ankamaroan’ny olona ny raokandro na ny fanafody tsotsotra atao ao an-trano rehefa tsy salama. Aorian’izay vao manatona dokotera rehefa tsy sitrana.
Anisan’ny irika farany hitadiavan’ireo marary mafy vonjy ihany koa anefa ireo mpitsabo nentim-paharazana eto amintsika.